Latvian Online Casino Sites | Online Casino Bonus Codes
Loading ... ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းလွတ်လပ်ရေးကြေငြာချက်အပြီးတွင်လက်ဗီယမ်ဂိမ်းလုပ်ငန်းသည်တိုးတက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိလုံးဝထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုလောင်းကစားနှင့်ထီများထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးဌာနဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်လိုင်စင် ၁၇ ခုထုတ်ပေးပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လောင်းကစားကုမ္ပဏီများသည်ယူရိုသန်း ၁၈၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့ပြီးအများစုမှာ slot machines များရရှိခဲ့ကြသည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုင်းပြည်၏လောင်းကစားဥပဒေများကလောင်းကစားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်လာသည်။ လောင်းကစားအတွက်အခွန်တိုးမြှင့်ပေးရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လောင်းကစားခြင်းနယ်ပယ်ကိုကန့်သတ်ရန်အခြားတင်းကြပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်လောင်းကစားအရေအတွက်များပြားလာသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်လောင်းကစားရုံ (၅) ရုံနှင့်ဂိမ်းခန်းမ (၃၀၀) ကျော်မျှသာရှိပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဝက်နီးပါးရှိသည်။
နိုင်ငံတွင်းရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားဈေးကွက်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တရားဝင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ လတ်ဗီးယားရှိလောင်းကစားခြင်းကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်းလောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးသည်မသင်မနေရလိုင်စင်ရပြီးဝင်ငွေအားလုံး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုအခွန်ပေးဆောင်ရသည်။ သို့သော်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၌အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းဥပဒေများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဥရောပ၌အာရုံစိုက်လာသည့်ဥပဒေကိုပြောင်းလဲရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
2014 ၏တရားအရ, ကမ္ဘာတဝှမ်းအကျော်ကြားဆုံးဖဲချပ်ဝေများအပါအဝင်လတ်ဗီးယားရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းအားလုံးသည်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံသားများအားတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်နိုင်ငံအတွင်းမှတ်ပုံတင်သင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားဝိုင်းလောင်းကစားဝိုင်းပိတ်ဆို့ခံထားရသော site များ၏စာရင်းအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့, ယနေ့ထက်ပိုမိုဒိုမိန်းကျော်ရှိပါတယ်သော။
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှကစားသမားများကိုလက်ခံပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ ဤနေရာတွင် slot machine မှလောင်းကစားရုံဂိမ်းများအထိဖျော်ဖြေရေးအမျိုးမျိုးကို NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming နှင့်အခြားသူများမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသောဖျော်ဖြေမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
လတ်ဗီးယား - ခေတ်မီဆန်းပြားပြီးလှပသောကြော့ရှင်းသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပယင်း၊ ဆော်လမွန်ငါးနှင့်ဘောလ်တစ်ပင်လယ်အပေါ်အလွန်ကောင်းသောရှုခင်းများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ မြောက်ဘက်ရှိ Riga၊ Jurmala နှင့်ကျော်ကြားသောအပန်းဖြေစခန်းများသည်အကန့်အသတ်ရှိနေသော်လည်းလှပသောသဘာဝမဟုတ်ပါ - ဤအရာများသည်ဤတိုင်းပြည်၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဒါကလတ်ဗီးယားမှာရှိတဲ့လောင်းကစားရုံလုပ်ငန်းနဲ့အတူအခြေအနေတွေ၊ အွန်လိုင်းကာစီနိုမှာဒီနိုင်ငံမှာကစားဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသလားဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းပါးမှာရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိပါကခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတရားမဝင်စာရင်းသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။
ပြည်တွင်းအော်ပရေတာများသည်လိုင်စင်ရပြီးသူတို့၏အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ Optibet၊ Olympic Casino Latvia, Joker Ltd, viensviens.lv၊ “ DLV”,“ Alfor” ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များဖြစ်သည်။ အားလုံး6.lv domains များပေါ်တွင်ရှိ၏
ရီဂါတွင်မြေယာလောင်းကစားရုံ ၃၀ ရှိသည်။ ဟိုတယ်တွင်တည်ရှိသည်။ 30 + နိုင်ငံကူးလက်မှတ်;
လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာလတ်ဗီးယားဥပဒေ - သမိုင်းနောက်ခံ
ဆိုဗီယက်ခေတ်တွင်လတ်ဗီးယားသည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ဥပဒေနှင့်အပြည့်အဝလိုက်နာပြီး၎င်း၏ပိုင်နက်တွင်လောင်းကစားခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောပြည်နယ်ထီခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤ နေ့မှစ၍ ဤနိုင်ငံမှလောင်းကစားကဏ္ of ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းစတင်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည့်အဓိကဖြစ်ရပ်များနှင့်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ။
1990 နာမည်ပြဟိုတယ်၌ပထမဆုံး Riga လောင်းကစားရုံ "Riga" ။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံသည်လိုင်စင်ဖြင့်လည်ပတ်သည်၊ သို့သော်သူတို့ကအနည်းငယ်ပေးသည်။ အာဏာပိုင်များ - ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၊ ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ဘဏ္Ministryာရေး ၀ န်ကြီးဌာန။ လက်တွေ့တွင်၊ ဤအချက်သည်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသောတိုင်းပြည်မည်မျှနှင့်လောင်းကစားရုံများမည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုမည်သူမျှအတိအကျမသိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
1994 “ ထီနှင့်လောင်းကစားခြင်း” နှင့်“ ထီနှင့်လောင်းကစားအတွက်အခွန်နှင့်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ” ပထမဥပဒေများကိုပြ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဒီဥပဒေတွေကလောင်းကစားအတွက်အခွန်ပေးဆောင်တာကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသလိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းမှာပါ ၀ င်ဖို့လိုင်စင်နဲ့ပါမစ်တွေထုတ်ပေးတာလည်းပါ ၀ င်တယ်။
1995 နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသည်အော်ပရေတာ၏ရှယ်ယာအရင်းအနှီး၏ ၄၉% ထက်မပိုစေနိုင်သည်။ လက်ဗီယာဂိမ်းစီးပွားရေးအသင်း၏အသင်း။
2005 လောင်းကစားနှင့်လောင်းကစားများဆိုင်ရာဥပဒေအသစ် - လောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် the ည့်သည်များအားစည်းကမ်းတင်းကျပ်ခြင်း။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ်၊ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ လောင်းကစားစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပေးခြင်းဖြစ်သင့်သည်။
2014 ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ လတ်ဗီးယားတွင်လိုင်စင်မရှိသောနိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားသူများအားပိတ်ဆို့ခြင်း၏အစဖြစ်သည်။ လောင်းသည်လောင်းကစားနှင့်လောင်းကစားခြင်း (စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လောင်းကစားကြီးကြပ်ရေးစစ်ဆေးခြင်း - IAUI) ကိုစစ်ဆေးခြင်းတွင်ကြီးကြပ်သည်။ တရားဝင်တရားဝင်လိုင်စင်ရရှိထားသောအွန်လိုင်းအော်ပရေတာများသာလတ်ဗီးယားတွင်ရှိသည်။ ဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ပုံမှန်အခွန်ပေးဆောင်သည်။
လတ်ဗီးယားရှိတရားမဝင်လောင်းကစားရုံများသည်အင်တာနက်အော်ပရေတာများကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ အကယ်၍ သင့်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတစ်ခုကိုဝင်ခွင့်ရှိရင်ကစားလို့ရပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ၀ င်ရောက်မှုရှိသည် - သင်ကစားနိုင်သည်။ သို့သော်တရားမဝင်ဆိုက်များ၏စာရင်းအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာသတိထားပါ။ အကယ်၍ သင်၏လောင်းကစားရုံသည်“ အနက်ရောင်စာရင်း” တွင်ပါ ၀ င်ပါကအကောင့်အသုံးပြုခွင့်ကိုဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲပြီးအခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှသာသင်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
ဒီဂိမ်းဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံမှာတရားဝင်ပါသလား။ လတ်ဗီးယားတွင်လက်ရှိအခြေအနေမှာတားမြစ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိပါ။ သင်ဆိုဒ်ကိုဝင်ကြည့်လျှင်သင်ကစားနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များသည်အချို့သောနိုင်ငံများမှသုံးစွဲသူများကို IP လိပ်စာများဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုလောင်းကစားရုံမှာတွေ့နိုင်တယ်။
အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတွေကိုစိတ်ချရသလား။ ၎င်းအတွက်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလောင်းကစားရုံစာရင်းကို သုံး၍ လတ်ဗီးယားပိုင်နက်တွင်တရားဝင်မှုကိုရှင်းလင်းပြသနိုင်သည် (စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စာရင်းတွင် ၁၀၀% အာမခံချက်၊ အဘယ်သူမျှမပေးနိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်သို့) မှန်ကန်သောအွန်လိုင်းအော်ပရေတာကိုရှာဖွေပါ။
တုံ့ပြန်ချက်များရှိနေခြင်း - ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်၊ စကားပြောခြင်း၊
protection system - SSL စာဝှက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်း။
ဘောနပ်စ်စနစ်ရှိပါသလား။ အဘယျသို့အလောင်းအစားနှင့် "ထွက်သရုပ်ဆောင်" အခြေအနေများ? သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကဘာလဲ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဂိမ်းရှိပါသလား။ လောင်းကစားရုံစည်းမျဉ်းတွေ၊ site navigation တွေအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသလား။
သင်ဤမေးခွန်းများကိုသင့်ကိုယ်သင်မေးပါကသင်ကစားပွဲကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ကာစီနိုလောင်းကစား၏အစတွင်ငွေသွင်းခြင်းမပြုဘဲစစ်ဆေးခြင်း (များသောအားဖြင့်အခမဲ့ဂိမ်းများရှိသည့်) ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်လိုအပ်ပါကဂိမ်းစည်းမျဉ်းနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အမြင့်ဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိပြီးသူတို့၏ရန်ပုံငွေဆုံးရှုံးမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏မြို့တော်၌အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားရှိသောလောင်းကစားလုပ်ငန်း ၃၀ ခန့်ရှိသည်။ အကြီးဆုံးနဲ့ဇိမ်ခံဆုံးနှစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ အိုလံပစ်အတွက် Voodoo ကာစီနို၏ နှင့် တော်ဝင်ကာစီနို .
သူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင် Olympic Entertainment ၏အုပ်စု , ထိုဘောလ်တစ်ဒေသတလျှောက်လုံးအဖြစ်ပိုလန်, လိုဗက်ကီးယား, ဘီလာရုစ်နှင့်အီတလီမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်၏ကွန်ယက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့။
စိတ်မပူပါနဲ့လောင်းကစားရုံသည်မှော်အတတ်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ဟိုတယ်၌တည်ရှိသောပထမတန်းစားစားသောက်ဆိုင် ရှိတဲ့ Radisson Blu ဟောငျးမြို့အနီး။ ကစားစရာနေရာတွေ၊ ကစားစရာတွေအတွက်ကစားပွဲတွေ၊ ဘလက်ခ်ဂျက်နဲ့ဖဲချပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။
အလယ်ဗဟိုကနေနောက်ထပ်အနည်းငယ် Royal Casino Spa သည်ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည် ။ နိုက်ကလပ်၊ ဘား၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတို့ပါ ၀ င်သည့်ဖျော်ဖြေရေးအဆောက်အအုံဟောင်း၊ အလွန်လှပသော၊
ရှုပ်ထွေးသောလောင်းကစားကဏ္ part သည်အလွန်စျေးကြီးသည် - ရွှေ၊ တောက်ပသော၊ စပျစ်သီးအစရှိသောအရာများ - တော်ဝင်ခန်းများနှင့်ဆင်တူသည်။ တော်ဝင်ကာစီနိုတည်ခင်း.ည် Poker ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ် , လည်းပဲ အဆိုပါ Unibet အဆိုပါဖွင့်ပါ .
ရိုးရာဂိမ်းများ - slot machines, roulette, blackjack, etc ။
အကယ်၍ ရှိပါကအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးတွင်ကုဒ်နံပါတ်သည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသည်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာဝတ်စားဆင်ယင်ပြီးမည်သည့်ပြnoနာမျှမပါဝင်ပါ။
ရီဂါ, လတ်ဗီးယား -“ မြောက်ပိုင်းပဲရစ်”
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာရာဂျီသည်အရှေ့မြောက်ဥရောပ၏အရေးအပါဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုလက်ဗီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာလူ ဦး ရေ ၇၀၀၀၀၀ အောက်နည်းနည်းပဲနေတယ်။
ရီဂါသည်ဒေဂavaမြစ်ကမ်းပါးတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ပဲရစ်နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ Tallinn မှာလိုပဲ Riga မှာအံ့သြစရာကောင်းတယ် မြို့ဟောင်း Gothic မှ Art Nouveau အထိကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအဆောက်အအုံအတော်များများကိုတွေ့ရသည်။
လတ်ဗီးယား၏သမိုင်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။ အင်အားကြီးနိုင်ငံများထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု၏ဗဟိုတွင်တိုင်းပြည်သည်နောက်တဖန်မတွေ့ရပါ။ မြောက်မြားစွာသောစစ်ပွဲများသည် Riga ၏ခေတ်သစ်ပုံသဏ္stronglyာန်ကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
1 ။ မြို့ဟောင်း: လမ်းများ၏ဝင်္, cobblestone, ထူးခြားတဲ့အလယ်ခေတ်ဇာတ်ကောင်။ မြို့တော်ခန်းမရင်ပြင်ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Baroque အဆောက်အအုံများမှအနုပညာမျက်မှန်နှင့် Gothic မျက်လုံးများသည်မျက်ရည်မကျပါ။
များစွာသောအသင်းတော်များ၏မြို့ဟောင်း၌ - ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် စိန့်ပီတာဘုရားကျောင်း ။ မကြာသေးမီအချိန်အထိ၊ စကားမစပ်, မြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး - မီတာ 120 ကျော်။
2 ။ Freedom ကိုမော်ကွန်းတိုင်အမှတ်: မြို့၏သင်္ကေတတစ်ခု။ ၎င်းသည်ခေါင်းကိုကြယ်သုံးပွင့်ကိုင်ထားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရုပ်ထုတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ကြယ်များသည်လတ်ဗီးယားပြည်နယ်သုံးခုကိုပုံဆောင်သည်။ ၎င်းသည်တိုင်းပြည်၏လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပြိုလဲနေသောတိုက်လေယာဉ်များ၏ဂုဏ်အသရေအတွက် ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ခေတ်တွင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး သည်သယ်ဆောင်သွားသော်လည်းကျန်ရှိနေသေးသည်။
3 ။ ဗဟိုစျေး: မြို့ဟောင်း၏တောင်ဘက်တွင်စျေးကြီးပြီးစျေး ၀ ယ်ထွက်နိုင်သည့်စျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ ဈေး၊ သင့်လျော်သောဈေးနှုန်းများနှင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်သည်ယူနက်စကို၏ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာမူလကလေယာဉ်ဝန်ထမ်းများအတွက်အစေခံရန်ဆောက်လုပ်ထားသောလေယာဉ်ရုံဟောင်းတွင်တည်ရှိသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည်ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်စျေးဝယ်စင်တာကိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော်လည်းသတိထားပါ၊ တန်ဖိုးရှိသည်မှာထိုကဲ့သို့သောနေရာ - လက်ကိုင်အိတ်များအတွက်ပရဒိသု။
ရီဂါရဖို့ကိုဘယ်လို: မော်စကို၊ စိန့်ပီတာစဘတ်၊ မင့်ခ်စ်၊ ကိယက်ဗ်နှင့်အခြားမြို့များမှနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပျံသန်းမှု၊ ရထားများသည်လည်းနေ့တိုင်းပြေးနေသည်။ လတ်ဗီးယားသို့ဝင်ရန်ရုရှားလူမျိုးများသည်ဗီဇာလိုအပ်သည်။
3.0.1 လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာလတ်ဗီးယားဥပဒေ - သမိုင်းနောက်ခံ
3.1.2 ရီဂါ, လတ်ဗီးယား -“ မြောက်ပိုင်းပဲရစ်”